House Lunja, iimbono evulekileyo ukusuka pool yabucala, Istria - I-Airbnb
House Lunja, iimbono evulekileyo ukusuka pool yabucala, Istria
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSuzana
Indlu efudumeleyo, eyamkelekileyo enechibi labucala kunye nembonakalo entle evulekileyo yeenduli ze-Istrian.
Ipropati iqulethe izindlu zamatye ezimbini; indlu enkulu ilala 4 (igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo) kwaye encinci ilala i-2 (igumbi lokuhlambela lakhe). Kukho indawo yokuhlala kwi-terrace kunye nezitulo ezininzi zokuphumla ezijikeleze i-50m2 pool.
Le ndlu ikufutshane nesikwere esikhulu sedolophu encinci epholileyo yaseVižinada, enye yeendawo eziphambili zokwenziwa kwewayini e-Istria. Ijikelezwe ziindlela zokuhamba intaba kunye neebhayisekile. Iilwandle ziyi-15 min kuphela kude.
Ipropati ikwisitalato esizolileyo (esifile). Ithafa linelanga imini yonke kodwa ngeentsuku zasehlotyeni ezishushu uya kuwaxabisa amabala anomthunzi. Njengoko indlu iphezu kwenduli, umbono uvulekile ngokupheleleyo (180 degrees). Indlu ineendonga ezingqindilili zamatye (ukuyigcina ipholile ngexesha lasehlotyeni) kodwa ukuze kuphole ngakumbi, kukho ii-air-conditioner ezibini kunye nefeni. Indawo yokuhlala ibanzi, ibonelela ngeesofa ezimbini kunye netafile yokutyela ezintandathu. Kukho i-wardrobe eyaneleyo kuwo onke amagumbi okulala, kwaye kwigumbi lokuhlambela eliphambili kukho ishawa yomphunga yababini. Ikhitshi lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba. Iifestile zegumbi lokulala zifakelwe inethi zokuthintela iingcongconi.
Kukho iindawo zokupaka iimoto ezi-2.
4.91 · Izimvo eziyi-32
IVižinada ikwenye yezona ndlela zinomtsalane zokukhwela intaba kunye neebhayisekile e-Istria-indlela yaseParenzana. Ungaqala uhambo olusuka endlwini yakho okanye uqashe ibhayisekile kwaye uhambe ukukhwela- ecaleni kweParenzana, kukho ezinye iindlela ezikhokelela elunxwemeni okanye kwiidolophu ezikufutshane zaseMotovun okanye eGroznjan. Inkulu kwiholide yezemidlalo entwasahlobo okanye ekwindla.
Amanyathelo ambalwa ukusuka kwindlu, kufuphi nesikwere esikhulu, uya kufumana enye yezona zinto zibalulekileyo (inkulungwane ye-12) i-fresco e-Istria - zikwicawa encinci yaseSt.
Njengommandla wokwenza iwayini, iVižinada kunye neendawo ezingqongileyo zibonelela ngeendawo ezahlukeneyo zewayini (kunye neprosciutto, itshizi, iminquma..) ukungcamla. Kukwakho neendawo zokutyela ezintle ezisemaphandleni ezibonelela ngokutya kwasekhaya.
Ukutya okusisiseko, kukho iivenkile ezimbini ezincinci edolophini kunye nokuthenga okukhulu, iPoreč okanye iNovigrad zikumgama nje we-15 min.
Ngo-2020, iRijeka (i-1 hr drive) likomkhulu leNkcubeko laseYurophu, elinemidlalo eyahlukeneyo, imiboniso, imiboniso njl.
Ndayifumana le ndlu ngesabatha eIstria; Ndandizithanda iimbono zayo ezivulekileyo kunye nokuzola kwendawo. Njengoko ndihlala eNetherlands, ndichitha iiveki ezimbalwa ngonyaka eVižinada, kwaye xa ndingekho, ndingathanda ukwabelana nabanye ngale ndawo intle. Ndisoloko ndifumaneka kuqhagamshelwano nge-imeyile okanye ngefowuni. Umamkeli wakho wasekhaya uMiranda uya kukunceda ngayo nantoni na oyifunayo ngelixa useVižinada kwaye unabamelwane abalungileyo nawe!
Ndayifumana le ndlu ngesabatha eIstria; Ndandizithanda iimbono zayo ezivulekileyo kunye nokuzola kwendawo. Njengoko ndihlala eNetherlands, ndichitha iiveki ezimbalwa ngonyaka eViži…